မွနျမာယူနီကုဒျစံစနဈဖွငျ့ ဆကျသှယျအသုံးပွုမညျ့အကွောငျး အသိပေးကွညောခွငျး
ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံတျော အစိုးရ၏ နိုငျငံတကာ အသိအမှတျပွုယူနီကုဒျစံစနဈကူးပွောငျးသညျ့ ရညျမှနျးခကျြအား ထောကျခံသညျ့အလြောကျ စှမျးရညျရှဆေ့ောငျလူမှုရေးအသငျး (စီဘီအိုငျ) သညျ မိတျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ လူကွီးမငျးတို့ကို ဆကျသှယျပွနျကွားရာတှငျလညျးကောငျး၊ လုပျငနျးမြားအတှကျ ရေးသားသညျ့စာမြားတှငျလညျးကောငျး ၂၀၁၉ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနမှေ့စ၍ Unicode Standard/ မွနျမာစာစံစနဈကိုသာ အသုံးပွုသှားမညျဖွဈကွောငျး လေးစားစှာဖွငျ့ အသိပေးအကွောငျးကွားပါသညျ။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုယူနီကုဒ်စံစနစ်ကူးပြောင်းသည့် ရည်မှန်းချက်အား ထောက်ခံသည့်အလျောက် စွမ်းရည်ရှေ့ဆောင်လူမှုရေးအသင်း (စီဘီအိုင်) သည် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူကြီးမင်းတို့ကို ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများအတွက် ရေးသားသည့်စာများတွင်လည်းကောင်း ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ Unicode Standard/ မြန်မာစာစံစနစ်ကိုသာ အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားပါသည်။
Vacancy Announcement for Trainer Post
Capacity Building Initiative (CBI) is seeking highly motivated and committed person for the position of Trainer.
Announcement | Focus Training | Social Entrepreneurship and Innovation ‘Develop your idea intoasocial enterprise’ in Bangkok Thailand from 15-18 October 2019
We would like to share that the Civil Society Academy would like to announce Focus Training | Social Entrepreneurship and Innovation in Bangkok, Thailand from 15 to 18 October 2019
The Focus Training consists of 4-days focus trainings – it specializes in different key topics related to social entrepreneurship and innovation. This training course has been run successfully in Cambodia and India and we guarantee top facilitation through Joachim Schwarz (Germany) and Trang Nguyen (Germany). Language is English.